Wararka - Shandong Limeng ayaa loo qabtay xafladda xafladda ee laanta cusub ee warshadda
Bishii Maarso 6, 2019, Shandong Limeng ayaa lagu qabtay xafladda xafladda laanta cusub ee warshadda. Wada-hawlgalayaasha Limeng ayaa sidoo kale ka qaybgalay munaasabadda.
Si loo ballaariyo wax soo saarka shirkadda loona kobciyo mashaariic dheeri ah, Limeng Pharm waxay ku maalgelinaysaa 1.2 milyan ginni si ay u iibsato 10 hektar oo dhul ah. Laanta cusub ee warshada ayaa loo dhisi doonaa aqoon isweydaarsiyo socon doona 4000 mitir murabac ah. Waxaana lagu dhamayn doonaa 10 bilood gudahood.
Waqtigan xaadirka ah, shirkadda Limeng waxay leedahay daawada casriga ah ee Shiinaha, raashinka, aqoon isweydaarsiga wax soo saarka, aqoon isweydaarsiga qalabka caafimaadka, aqoon isweydaarsiga caanaha iyo aqoon isweydaarsiga soo saarista dawooyinka Shiinaha, dhammaantoodna waxay dhaafeen shahaadada aqoon isweydaarsiga boqol-kunka ah. Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyey Australia, USA, Puerto Rico iyo dalal kale iyo aagag. Waxaa ka mid ahaa waxyaabaha laga soo saaray dhirta, nacnac xanjo ah, maaskaro waji ah iyo jeermis-laawe aan gacan lahayn iyo wixii la mid ah.
Ka dib markii la furi doono laanta cusub ee warshada, mashaariicda nacnaca ciridka ayaa loo balaadhin doonaa ilaa afar xariiq oo wax soo saar oo ku jira aqoon isweydaarsiga kaabayaasha cuntada. Aqoon isweydaarsiga qalabka caafimaadka, aagagga waxaa lagu ballaarin doonaa 5000 mitir murabac oo waxaa lagu ballaarin doonaa 10 xariiq wax soo saar si loo soo saaro maaskaro wajiga caafimaadka iyo maaskarada wajiga qalliinka caafimaadka. Wax soo saarka maalinlaha wuxuu noqon doonaa 2 milyan. Tuubada muunad qaadista ee la tuuri karo ayaa sidoo kale lagu soo saaray aqoon isweydaarsigeenna.
Limeng Pharm's sidoo kale waxay lashaqeysay SGS, Bsi Uk iyo wakaalado kale oo caalami ah oo caan ka ah baaritaanka sadexaad si loo cadeeyo nidaamka maaraynta qulqulka, shahaadada CE iyo wixii la mid ah si loo hubiyo tayada wax soo saarka dibada.
Shirkaddu waxay u ololeysaa fikradda maaraynta shirkadda "Ku badbaada Tayada, Ku Horumarinta Amaahda, Ku jihaysan tikniyoolajiyadda, Faa'iidooyinka ku saabsan Maareynta". Waxay si adag u hirgelinaysaa sharciyada la xiriira iyo xeerarka sharciga ah ee lagu fulinayo wax soo saarka iyo maareynta, waxay soo bandhigeysaa habka maareynta horumarsan ee si wax ku ool ah isugu dhafan tiknoolajiyadda, wax soo saarka, suuqa shirkadda, laguna gaarayo natiijooyinka muhiimka ah, taas oo aasaas adag u ah shirkadda inay horumariso ilaa heer kale oo cusub isla markaana abuuraan qarni qurux badan.